भोलि कार्तिक १७ गते बुधबार ,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस राशिफल! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि कार्तिक १७ गते बुधबार ,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस राशिफल!
admin November 2, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 350 Views
तपाईको दिन आर्थिक तथा व्यापारिक रुपमा लाभदायक छ। आर्थिक लाभ मिल्नेछ । दीर्घकालिन आर्थिक योजना पनि बनाउन सकिनेछ । शरीर र मन स्वस्थ रहनेछ। साथीभाइ र पारिवारिक सदस्यसँग दिन खुसीसाथ बित्नेछ। धेरै व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रहने अवसर प्राप्त हुनेछ।
विचारको विशालता र बोलीको जादुले अरूलाई प्रभावित र मोहित बनाउनु सक्नुहुन्छ। जनतासँग सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ । बौद्धिक बहस वा वादविवादमा सफलता मिल्नेछ । पढाइ लेखाइमा रुचि बढ्नेछ। पाचन प्रणालीमा समस्याको कारण स्वास्थ्य बिग्रन सक्ला।
महत्वपूर्ण निर्णय लिन दुविधा महसुस गर्नुहुनेछ। विचारको भरपर्दो कारणले मानसिक थकानको अनुभव गर्नुहुनेछ। अनिद्राका कारण शारीरिक असुविधा हुनेछ। पानी वा अन्य तरल पदार्थ भयानक हुन सक्छ।
काममा सफलता र नयाँ कार्यको आरम्भको लागि शुभ दिन छ। इष्टमित्र तथा आफन्तसँगको भेटघाटले मन प्रसन्न रहनेछ । छोटो यात्रा होला। दाजुभाइसँग मेलमिलाप हुनेछ। आर्थिक लाभ र समाजमा मान सम्मान मिल्नेछ ।
टाढाको आफन्त र साथीसँगको सञ्चार व्यवहारबाट लाभ मिल्नेछ। परिवारमा सुख शान्ति छाउनेछ। राम्रो भोजन प्राप्त हुनेछ। तोकिएको काममा सफलता मिल्नेछ । गणना योजना र अत्यधिक सोचले मनमा भ्रम पैदा गर्नेछ।
वैचारिक समृद्धि र बोलीको आकर्षणबाट लाभ मिल्नेछ र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकास गरी आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुहुन्छ। व्यापारको दृष्टिकोणले लाभदायक दिन छ। तपाईको स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ। आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ र मनमा हर्षोल्लास हुनेछ ।
बोली र व्यवहारमा ध्यान राख्नुपर्नेछ । अन्य व्यक्ति वा आफन्तसँग हिंसात्मक अन्तरक्रियाको होला। आम्दानी भन्दा धेरै खर्च होला। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। दुविधा र समस्याले मनको शान्ति हराउनेछ।
घरायसी जीवनमा सुख र सन्तुष्टिको अनुभूति गर्नुहुनेछ। पत्नी र छोराबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। शुभ कार्य होला। रोजगारी व्यवसायमा राम्रै अवसरका कारण आम्दानी वृद्धि हुनेछ । साथीभाइसँग पिकनिकको आयोजना हुनेछ । महिला मित्रबाट लाभ मिल्ने सम्भावना छ ।
आर्थिक तथा व्यापारिक कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि शुभ दिन छ। कार्य सफलतापुर्वक सम्पन्न हुनेछन् । परोपकारको भावना बलियो रहनेछ। तपाईको दिन रमाइलोमा बित्नेछ। पेसा-व्यवसायमा पदोन्नति र मान सम्मान मिल्नेछ। घरायसी जीवनमा सुख सिर्जना हुनेछ।
तपाईको लागि दिन फलदायी रहला। बौद्धिक कार्य र व्यवसायमा नयाँ विचार लागू हुनेछन्। लेखन र साहित्यसँग सम्बन्धित प्रवृत्तिमा रचनात्मकता देखिनेछ। मनको कुनै कुनामा अस्वस्थता महसुस हुनेछ। शारीरिक थकान र उदासीनता रहनेछ।
नकारात्मक विचारले मनमा निराशा पैदा गर्नेछ। तपाईले मानसिक उत्तेजना र क्रोधको अनुभव गर्नुहुनेछ। खर्च बढ्नेछ। परिवारमा मनमुटाव र कलहको भावना रहला। स्वास्थ्य खराब रहला। मानसिक शान्ति रहला।
तपाईको दिन सुख शान्तिपूर्वक बित्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा पति-पत्नीबीच निकटताको अनुभूति हुनेछ। आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ । प्रेमी- प्रेमिकाको रोमान्स गहिरो हुनेछ। सार्वजनिक जीवनमा प्रसिद्धि मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा राम्रो सुख मिल्नेछ।
Previous फोन उठाउने बित्तिकै `हेलो´ भन्ने चलन कहाँबाट कसरी आयो त ? जान्नुहाेस्
Next एउटा घर जुन दुईवटा देशको सिमानामा छ, फरक ढोकाबाट गए अर्कै देश पुगिन्छ